पशुमा देखिने एन्थ्रेक्स मानिसमा सर्ने खतरा — OnlineDabali
परीक्षणका लागि विशेषज्ञ टोली पाल्पा पठाइयो
३ माघ ।
केही समयदेखि पाल्पाका विभिन्न स्थानमा पशुमा देखिएको एनथ्रेक्स रोग मानिसमा फैलिने खतरा देखिएको छ । यो रोगबाट मानिसको समेत ज्याने लिन सक्ने भन्दै विशेषज्ञसहितको टोली पठाउने भएको छ ।
यो रोग लागेका पशु भटाभट मर्न थालेपछि मान्छेमा सर्न सक्ने भन्दै विशेष टोली पठाइने भएको हो । यो रोगको संक्रमण मानिसमा सरेपछि उपचारको संभावना न्युन रहेकाले बेलैमा होसियारी अपनाउनु पर्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको
महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार पशु मर्ने क्रम बढेकाले यस विषयमा अध्ययन गरी नियन्त्रण गर्न विशेष टोली पठाउन लागिएको हो । साउनदेखि पशुमा यो रोग देखिएको रहेछ, पछिल्लो समय पशु मर्ने क्रम बढेपछि संभावित खतरा रोक्न हामी लागिपरेको मरासिनीले बताए ।
एन्थ्रेक्स रोगका जिवाणु पशुबाट मानिसमा सर्छ । पशुजन्य उत्पादन (दुध, दही मासुलगायत) र पशुसँग किसानको घुलमिलका कारण रोग सर्ने संभावना बढी हुने डा. मरासिनीले बताए ।
एन्थ्रेक्सले मानिसको छातिमा संक्रमण गरे छातिको इन्फेक्सनदेखि निमोनियासम्म हुन सक्ने, उच्च ज्वरो आउने, पेटभित्र भए रगत बान्ता, डाइरिया हुने र छालामा भए डरलाग्दो खटिरा देखिने उनले बताए ।
रोग मानिसमा सरे मृत्युदर बढी हुने भनाई उनको छ । पशुमा यो रोग देखिएका क्षेत्रका मानिस बिरामी परे जतिसक्दो चाँडो नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न उनले सल्लाह दिएका छन् । यो रोगबाट बिरामी परेका पशुबाट जोगिन पनि महाशाखाले सर्वसाधरणलाई अनुरोध गरेको छ ।
Posted in अडियो फाइल, मुख्य खबर, शिक्षा-स्वास्थ्य | Leaveareply
म्यानचेस्टर सिटी पाँचौं चरणमा प्रवेश